Ìgwè mmadụ | Martech Zone
Thursday, July 30, 2009 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
I nwere ike na-eche na ọ bụ ezigbo iju n'ihi na a Ihọd na launching ọhụrụ ya online gị n'ụlọnga iji kwalite ọzọ na-arụ ọrụ na gị n'ụlọnga kpam kpam… ma nke ahụ bụ ihe m na-aga ime. Ekwenyesiri m ike na m ga-enweta ụfọdụ akwụkwọ ịkpọasị sitere n'aka ndị enyi mmebe m maka izipu nke a. M dịkwa mma na nke ahụ. Aga m akọwa ihe mere… nanị na-ekiri na video na-akọwa ìgwè mmadụ mbụ:
Arụmụka na ụlọ ọrụ megide Ìgwè mmadụ bụ na sistemụ na-akwalite ojiji nke ịkọ nkọ na-ewe talent nke were ọtụtụ afọ iji zụlite ma mee ka ọ bụrụ ngwaahịa. Enwere ihe dum Mba! SPEC ije, na-ekwu:
Mgbasa ozi NO! SPEC na-arụ ọrụ dị ka ụgbọ iji jikọta ndị na-akwado echiche ahụ na ịkọwapụta ọrụ na-emebi ikike nke imewe yana n'ikpeazụ mebie ọrụ nke onye ahịa ahụ.
Gịnị bụ Spec?
Spec abụrụla ụdị dị mkpirikpi maka ọrụ ọ bụla emere na usoro nkọwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọrụ ọ bụla achọrọ maka nke akwụghị ụgwọ ziri ezi na nke ezi uche dị na ya, ọkacha mma na ederede.
Kedu ihe dị njọ na nke ahụ?
Na a nutshell, spec chọrọ mmebe itinye oge na ihe onwunwe na-enweghị nkwa nke ịkwụ ụgwọ.
Otu ìgwè mmadụ enweela mmetụta okpomọkụ - n'okpuru mwakpo site na a CrowdSINK mkpọsa. Achọpụtala ụfọdụ ọrụ na CrowdSPRING ka ọ bụrụ mbipụta ọrụ sitere n'aka ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Na ngosi zuru oke, agbalịrị m ọrụ ahụ n'oge na-adịghị anya ma kwụọ $ 200 maka a ọkọlọtọ imewe maka saịtị na m na-aga overhaul (Lezienụ Calculator). Nwere ike inyocha nnyefe ma hụ ọtụtụ onyinye na ụdị dị iche iche edepụtara dabere na nkọwa m.
Nke a bụ ihe mere m ji enwe ekele maka ihe igwe mmadụ na-eme:
Nnukwu atụmatụ na ikike maka ịkọwapụta nkọwapụta nke nkọwapụta ihe na usoro ikpeazụ ga-emeri mgbe niile. Nke ahụ na-enye ndị nrụpụta mara mma n’enweghị nkwado ụlọ ọrụ ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke ndị ahịa buru ibu nwere ohere iji nweta nnukwu ọrụ na nnukwu ndị ahịa. N’aka ozo, a gha enweta ugwo maka oru nke ndi n’ese ihe obula sonyeere ya.
Nnukwu imewe nwere ike inye webụsaịtị ọ nwere ike iji bulie azụmaahịa n'ihu, mana na-enweghị ohere ịnweta onye nrụpụta, a na-amanye ụlọ ọrụ ịkpụ akụkụ ma nwee ọnụnọ imepụta nke na-adabaghị na ọrụ ha. Ndo ndị na-ese ihe, ọ bụghị banyere gị!
Nnukwu imewe anaghị eme ụlọ ọrụ. Uche bụ otu akụkụ nke atụmatụ zuru ezu. Apụghị m ịgwa gị ugboro ole m hụrụ okuku na-agba ọsọ ụlọ ọrụ na-atụfu a $ 30,000 oru ngo na-adịghị enweta ihe ọ bụla na-arụpụta - na mgbe ahụ na-ele ha mgbapụta na ahịa na isi na-esote aja. Ahụla m ụzọ nke anya mmiri mgbe ọ bịara n'ọrụ "Enweghị Spec".
Kwụ ụgwọ maka ịrụ ọrụ na-eme ka ndị na-eme nke ọma. Kwụ ụgwọ maka imewe oge enweghị nkwa nke arụmọrụ. Ọ bụrụ na ewe goro m rụọ weebụsaịtị ma ọ naghị arụ ọrụ, ekwesighi m ịkwụ ụgwọ m. Ọ bụrụ na mmadụ nyefere atụmatụ ọjọọ (ọnụọgụ ole na ole na ọrụ m CrowdSPRING), ekwesighi ịkwụghachi ha ụgwọ.
Kwụ ụgwọ maka ịrụ ọrụ nwere ike ịba uru maka nnukwu ndị na-emepụta ihe. Amaghị m ma ọrụ ahụ m rịọrọ were 10 nkeji ma ọ bụ 30 awa maka onye mmebe iji mezue. Achọghị m ịma. Nke ahụ pụtara na onye mmebe ahụ ga-akwụ ụgwọ pụrụ iche maka ọrụ m. Ọzọkwa, Aga m na-atụ anya iso onye na-ese ihe na-arụ ọrụ n'ọdịnihu iji nweta ọrụ na ogo na ọrụ m ọzọ.
Gini mere eji gha ata ndi ulo oru ahuhu site n’igba ugwo maka imewe nke oma? Kedu ihe kpatara na onye mmebe agaghị etinye ụfọdụ echiche iji hụ na ha mepụtara atụmatụ dabara na agụụ ụlọ ọrụ? The kasị mma ndị na-emepụta m maara mgbe niile iyi ka na-akọwa chọrọ na oké talent na ọbụna na-etinye ha onwe ha mbinye aka na oru ngo. Nnukwu ndị na-ese ihe enweghị ihe ha ga-atụ egwu maka ọrụ Spec.
Na nkenke, ekwenyere m na sistemụ dị ka CrowdSPRING ohere mepere emepe maka ndị omenkà nwere ọgụgụ isi iji bie ndụ dị ukwuu site na ịkwụghachi ụgwọ dị ukwuu na igbochi ndị na-emepụta ogbenye. Nakwa, ekwenyere m na ọ na-enye ohere maka azụmaahịa iji nweta ọnụ ala, ụdị mma ha na-agaraghị enwe ike ịnweta tupu.
Enwere m ọmịiko na ndị na-akwado NO! N'ezie m na-eme! Emeela m atụmatụ atụmatụ, sọftụwia, amụma, nzukọ, oku ọgbakọ, okwu, isiokwu, usoro nkwughari okwu… ndepụta ahụ na-aga n'ihu maka ọrụ 'Spec' nke m rụzuru na anaghị m akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na m bụ ndị na! Spec ahịa, M ga-enwe ike imeli eri ugbu a… na m ga-esi chịa ọchị nke ọ bụla nzukọ m na-aga.
N'eziokwu, a sị na m nwere usoro dị ka CrowdSPRING dị maka ọrụ m! Aga m etinye usoro na echiche m megide nke ụlọ ọrụ kachasị elu ụbọchị ọ bụla! Otu igwe anaghị egbu mmadụ, ọ bụ ahịa ọhụụ maka ndị na-emepụta ihe.
Tags: igwe mmaducrowdsource logo imeweagwakọta
Graham Joyce kwuru
Jul 31, 2009 na 1: 39 AM
My nwunye ka dechara a ìgwè mmadụSRPING oru ngo maka a logo maka ya obere nkà & crafts azụmahịa. O nwetara nzaghachi si n'akụkụ ụwa niile. Fọdụ nọ kpam kpam pụọ lekwasịrị, ndị ọzọ dị ịtụnanya. O natara ihe ruru nchikọta 50 zuru oke ma nwekwaa ike ịhọpụta ndị atọ "ndị ikpeazụ". Mgbe ajụrụ gị ka ị gbanwe nkọwa, dịka agba, mkpụrụ edemede, wdg, ndị nrụpụta niile nabatara ya nke ọma. Ọ kwụkwara $ 200 ma nwee obi ụtọ na ọ masịrị ya, na-eme atụmatụ ịgba akwụkwọ na weebụsaịtị yana iji igwe mmadụ. Na mba! SPEC ìgwè mmadụ, m ga-asị "Welcome na ọhụrụ iji / ewepụghị ụwa", ebe gị osompi nwere ike si 130 mba dị iche iche. Ndo ma disintermediation bụ unstoppable, dị nnọọ jụọ "ọkachamara" njem mmadụ.
Jul 31, 2009 na 1:01 PM
Graham - Echere m na ị bụ eziokwu na ọ bụ ihe a na-apụghị igbochi.
Jul 31, 2009 na 1: 42 AM
Daalụ maka nyocha ọrụ a. Ọ dịka ọ bụ ihe m kwesịrị ịpụta na TechStartups n'oge na-adịghị anya. Ana m enwe ekele mgbe niile n'eziokwu gị na nghọta ziri ezi nke azụmahịa.
Aha ya bụ Bryan Simpson
Jul 31, 2009 na 1: 49 AM
"Nnukwu atụmatụ na ikike maka ịkọwapụta nkọwapụta nke nkọwapụta ihe osise na nke ikpeazụ ga-emeri mgbe niile. Nke ahụ na-enye ndị nrụpụta dị ukwuu na-enweghị nkwado n'ụlọnga ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke ndị ahịa buru ibu ohere ịnweta nnukwu ọrụ na ndị ahịa dị ukwuu. a ga-akwụghachi ndị na-emepụta ihe ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ ha "
N'iji nkwanye ugwu niile, okwu a abụghị eziokwu. Na Crowdspring, onye na-azụ ahịa na-eduzi atụmatụ imewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam, site na mbido ụgwọ mbụ ha, wee site na nzaghachi (nke na-abụkarị karịa, ọ bụghị na-abịa). E nwere ọbụna ihe na-erughị a barometer nke ihe "oké" imewe bụ karịa na mbụ - a nke onye echiche na nke kacha mma nke oge. E nweghị ikpe ibiere na ihe n'ezie na-eme "ezi" imewe, na asịwo mgbe ahọrọ ọrụ na-abụghị "oké" imewe, kama kama ihe ha "na-amasị" (dị ka ha nri) ma ọ dịghị nkwa ọ bụla na "akwa" "imewe ga-utịp, ma ọ bụ ọbụna chọpụtara (ma e wezụga ndị ọzọ na-emepụta). Na asọmpi ọ bụla nke mmadụ, naanị ndị na-emeri emeri na-akwụ ụgwọ, yabụ ọbụlagodi na enwere ọtụtụ ụdị “oke” na asọmpi, ọtụtụ "ndị ukwu" na-arụ ọrụ enweghị "ụgwọ ọrụ" maka ọrụ ha.
N’ụzọ dị ịtụnanya, otu ndị ahụ na-arụ ụka na ndị na-emepụta ụlọ ọrụ erughị eru inweta ego maka ọrụ ha, yiri ka ọ na-eche na ndị na-azụ ahịa nwere ikike ịhazi ọnụ ala. Ọ bụghị ihe niile gbasara ndị na-emepụta ihe, mana ọ bụ akụkụ azụmaahịa nwere akụkụ abụọ. Ọrụ dị ka igwe mmadụSPRING na-emebi otu akụkụ nke usoro azụmahịa ahụ. Ọ masịrị m na ndị mmadụ na-atụgharị uche ma ọ bụrụ na ha anaghị ana 15% kwa ọrụ. O yiri ka ha kwenyere na ha nwere ikike ị nweta ndụ dabere na 'onyinye azụmahịa' ha. M na-eche ihe kpatara na gị, na ha, anaghị enwe otu aka ahụ iji lee ndị na-emepụta ihe n'otu ụzọ.
"Paykwụ ụgwọ maka ịrụ ọrụ na-eme ka ndị na-eme ihe ka mma."
Nke ahụ bụ okwu na-adịghị mma na blog post nke na-akwado ọrụ na-anaghị akwụ ọtụtụ ndị na-emepụta ha ụgwọ ọ bụla. Imirikiti ndị mmadụ nọ na igwe mmadụ anaghị eme penny na atụmatụ ha ma jiri echiche gị, nke ahụ ga-apụta na ha bụ ndị na-eme egwu. Echiche bụ na ịkwụ ndị na-akwụ ụgwọ ihe ọ bụla, na-enwe olileanya na ha ga-enweta ụgwọ ọ bụla maka ọrụ ha, na-eme ka ha bụrụ ndị nrụpụta ka mma. N'ezie, echiche ahụ agaghị arụ ọrụ ọ bụla na ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ ọkachamara ma ọ bụ na ọ bụghị.
Achọpụtakwara m vidiyo vidiyo nke ndị mmadụ. Dika nkwuputa ozi nke onwe ha kwuputara, ha nile banyere inyere "obere nwoke" aka. "Kpachara anya underdogs" bụ otu n'ime ha nkebi ahịrịokwu ha jidere m kwere. N’ụzọ dị ịtụnanya, egosiputara naanị otu “obere” ahụ na vidio a dị ka asọmpi ìgwè mmadụ, dị ka ebumnuche nke igwe mmadụSPRING dị ka nnukwu ụlọ ọrụ gosipụtara ọkụ na-enwu gbaa. Dị ka vidio ha si kwuo, igwe mmadụ na-aga ije naanị "obere nwa" azụmahịa. Ọ bụghị na m na-ajụ ha ka ha were ọnọdụ ahụ - ọ bụ ọdịdị nke asọmpi - mana ọ na-akwụ ụgwọ maka ọrụ mmadụ na-arụ na SPRING nke "ịkwa ọkwa egwuregwu" maka otu "underdog" ahụ. Dịkwa ka ọnọdụ "nnwere onwe ime nhọrọ" ha (ìgwè mmadụ na-eji ịnụ ọkụ n'obi agbachitere "ikike" nke ndị na-emepụta iji rụọ ọrụ, n'efu, maka ha, ebe ụlọ ọrụ ahụ na-enweta akara 15 n'elu) ọ bụ maka ìgwè mmadụ na-atụgharị uru. Ọ bụghị na enwere ihe ọ bụla na nke ahụ, mana ka anyị kpọọ ya ọ bụ.
May nwere ike ịbụ nri banyere crowdSPRING ịbụ onye "Agency egbu egbu" ma ha na-aga zọda n'elu a otutu nke green, naive na un / n'okpuru-n'ọrụ ndị na-emepụta (32k na-eto eto) tupu ha ji nganga wuli aha ahụ na uwe ha.
Jul 31, 2009 na 1:09 PM
Daalụ maka echiche gị na nke a. Dịka 'onye nzụrụ', echeghị m ọrụ 15% nke CrowdSPRING na-ewere iji mee ka ahịa a nwee. Ha na-azụlite ma na-akwado ya ma kwesiri ịkwụ ụgwọ. Ọ bụ mmemme afọ ofufo - ndị na-azụ ahịa agaghị anọ ebe ahụ ma ndị na-ese ihe agaghị adịkwa.
Banyere 'oke imewe'… n'ikpeazụ, mkpebi ahụ kwesịrị n'aka onye na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ahụ, ọ bụ na ị naghị eche?
Jul 31, 2009 na 7:21 PM
N'ezie, ekwesịrị m ikwenye na ụdị Bryan's "great" imewe ebe a. Doug, Amaara m na ị hụla ọtụtụ ihe atụ ebe ndị na-ere ịntanetị wannabe na-enweghị atụ na-emerụ onwe ha ma ọ bụ ndị nzuzu, karịa inyere ụlọ ọrụ ha aka. Otú ahụ ka ọ dịkwa na imewe, mana ọ ga-abụrịrị na ọ ka dịkwa.
Mkpebi ahụ kwesịrị ịdị n'aka onye zụrụ ahịa, ee, mana ọtụtụ ndị na-azụ ahịa chọkwara uru elele anya ọkachamara ọkachamara iji nyere aka duzie mkpebi ha na usoro echiche ha - ọbụlagodi na ha amaghị na enyemaka dị ha mkpa.
Jul 31, 2009 na 1: 56 AM
Da dị ka ọtụtụ ndị mmadụ dịka ịnakọta ego ịkwụ ụgwọ kama ịkwanye onwe ha. CrowdSpring na-ada ka nnukwu ajụjụ ọnụ nke ọrụ ma ọ bụ obere. Nyefee ọrụ gị na echiche gị ma ọ bụrụ na ha ka onye ọ bụla mma, ị ga-enweta ụgwọ ọrụ na ọrụ na ndị nwere ike ịghachite ma ọ bụ megharịa azụmahịa n'ọdịnihu. Tom Watson gosipụtara naanị ka a kụọ ya ma lelee ya na British Open izu gara aga. Ọ kpaliri onwe ya ịlụ ọgụ megide ndị egwuregwu na-eto eto na nke ka mma ma kwụọ ya ụgwọ. Cheedị ma ọ bụrụ na PGA Tour kwụrụ onye ọ bụla otu maka igosipụta na naanị ụgwọ ọrụ bụ ihe ngosi. Ọ ga - abụ ihe na - agwụ ike ma na - eme ihe karịa ugbu a, nke na - ekwu ihe 🙂
Jul 31, 2009 na 4: 58 AM
@chris "Ọ dị ka ọtụtụ ndị mmadụ dịka ịnakọta ego ego kama ịmanye onwe ha."
Right On Nwanne. D NA!
Lee, lee ihe a. Nwa m nwanyị na-alụ n'oge ọkọchị ọzọ ma ị rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-ese foto agbamakwụkwọ. Anabatabeghị na onye na-ese foto ugbu a, yana ụdị atụmatụ a niile na-aga n'ihu, azụmahịa m na-ese eserese bụ obere ọkụ. Amaghị m ma m ga - akwụli ụgwọ ụlọ ọrụ gị - kedu, $ 3995 maka "ngwugwu ngwugwu" yana ihe, narị nari asatọ maka onye na - ese foto?
Gwa gị ihe. Kwụsị m onye na-ese foto maka ụbọchị ahụ, mee ka ha gbaa agbamakwụkwọ ahụ, tụba m ngwugwu kachasị na nkọwapụta ma ọ bụrụ na Oriakụ ahụ masịrị m ihe ị mere, anyị ga-akwụ gị ụgwọ ihe anyị kpebiri na mmefu ego ga-abụ. - ihe ruru $ 700. Oh ee, a ga - enwe ndị foto agbamakwụkwọ iri na abụọ ọzọ ebe ahụ, na - asọ mpi maka egwu ahụ, mana echegbula onwe gị. Ọ bụrụhaala na ị na-agbanye onwe gị, ihe niile kwesịrị ịrụ ọrụ niile.
Chee ya dịka ụdị ajụjụ ọnụ ọrụ, ọ bụghị naanị na ịkwụ ụgwọ ahụ. M na-atụ anya na ọrụ gị kacha mma, kpatara anyị ga-achọ ịnye ụlọ ọrụ gị ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ Ọ B IFR your na ọrụ gị dị mma karịa mmadụ niile, n'ezie.
Nke a bụ ego - ma ọ bụrụ na nwanyị nwere mmasị n'ezie n'ihe ị na-eme n'agbamakwụkwọ ahụ, ọ ga-eche banyere iwe gị n'ọrụ, Ron na Elizabeth maka egwu ọzọ. Olee otú oyi ga-adị?
Nnọọ. Chris? Chọghị ịdị ka nwanyị ahụ goofer ị kwuru maka ya. Imaara, na-agbanye onwe gi?
Jul 31, 2009 na 1:19 PM
Ahụla m nke a ugbu a na ndị na-ese foto ụlọ akwụkwọ. Nwa m nwanyi nweta ngwugwu ma anyi nyere ya iwu ma obu anyi enyeghi ya. Ọ bụrụ na foto ndị ahụ masịrị anyị, anyị na-akwụ ụgwọ maka ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-ezighachi ya. M na - ezute onye na - ese foto taa - mana were ya ụgwọ n'oge gara aga ma amaara m na ọ ga - arụ nnukwu ọrụ - yabụ anaghị m arịọ maka ọrụ SPEC n'aka ya. Ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ m amaghị ya, n'agbanyeghị… M nwere ike ịbịakwute ya n'ụzọ dị iche!
Jul 31, 2009 na 2: 08 AM
Echere m na ị na-atụ uche isi nke NO SPEC ije. Ọ bụ banyere freelancers na solo ndị na-emepụta na-emebi emebi abụghị gị n'ụlọnga. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-agba chaa chaa na ọrụ ịkọwapụta ga-enye ohere ka ndị a na-akwụ ụgwọ dị elu karịa elu.
Askjụ onye toro nkà ha ruo oge ụfọdụ iji were $ 200 maka imewe (kwuo asia ọkọlọtọ) na ha nwere ike nọrọ otu ụbọchị zuru oke, ma ọ bụrụ naanị na a họpụtara ha, na-eweda ọrụ ahụ ala.
You nwere ike ịjụ onye edemede ka o mee otu ihe ahụ? Enwere m obi abụọ na ọtụtụ ndị edemede ga-edo onwe ha n'okpuru ụdị lọtrị ahụ.
Nke a nye m na-enyefe ọrụ imewe ka ọ bụrụ ọkwa nke ire ihe ịchọ mma n'akụkụ okporo ụzọ na mba ụwa nke atọ.
Ndị na-ese ihe na-abụkarị ndị mmadụ na onye ahịa ha na-anọ ogologo oge ma na-eleghara uru ha bara anya bụ ịghọ aghụghọ ule nke ngwa ahịa bara uru-ikike na iche echiche.
Lelee otú m si eche banyere ìgwè mmadụSPRING na blọọgụ m na http://sharkyscircle.blogspot.com.
Mara nwoke m.
Jul 31, 2009 na 1:16 PM
Ee, m ga-arịọ onye edemede ka ọ mee otu ihe ahụ. Na m nwere! Emechara m mmemme mmemme na Compendium Blogware wee chọọ onye edemede ọ bụla chọrọ isonye iji nye akwụkwọ ozi ederede n'efu nke a ga-ebipụta maka ụlọ ọrụ nke meriri asọmpi. Isi okwu nkwalite ahụ bụ iji hụ na ha nwere ike ide ọdịnaya ahụ yana ụlọ ọrụ ahụ chọpụtara ma ọ dabara adaba na ọ bụghị.
Echeghị m na àgwà nke imewe m natara bụ na a 'trinket' larịị, bụla. Ọ bụ ihe ịtụnanya mara mma. Apụghị m ikwu oge ọ were - ọ gaara 15 nkeji… ọ bụrụ na ị na-ele anya na aghụghọ osụk, ị ga-ahụ na mmebe ntị m nzaghachi na gbanwee ya imewe - kenha m arịrịọ.
Ekwenyere m gị na ịchọta nnukwu onye mmebe nke ga-adaba n'ụdị nke nzukọ gị ma ghọta azụmaahịa ahụ bụ ahụmịhe dị egwu ma dịkwa ọnụ ahịa ya. Ọ bụ ya mere m ji kwenye na ị nweghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe gị. Mgbe azụmaahịa m toro nke na m ga-akwado onye na-esepụta oge ma ọ bụ mmekọrịta, aga m aga n'ụzọ ahụ!
Jul 31, 2009 na 9: 20 AM
CrowdSpring bụ ndokwa maka ndị na-achọ inweta ọrụ. Ọ na-enye ebe ndị mmadụ bụ ọkachamara. M na-eme ka ebe obibi m na-enye websaịtị atụmatụ m makwa na m nwere ebe m ga-aga ịchọ ọrụ.
Jul 31, 2009 na 1:44 PM
Maka nghọta na-enye nghọta n'ime ihe na-aga n'ihu na webụsaịtị wepụtara ọ bara uru oge gị ịgụ nyocha a na ịntanetị site na ụbọchị ole na ole.
Jul 31, 2009 na 2:22 PM
David - nke ahụ bụ ihe mmụta dị omimi na omume a ma ana m akwado ndị niile na - agụ akwụkwọ m ile anya.
Jul 31, 2009 na 2:30 PM
Daalụ maka ilele anya, Doug, yana ị na-akwado ndị ibe gị ibe ahụ.
Jul 31, 2009 na 9:32 PM
David, ajụjụ ọnụ ị zitere bụ ezigbo ọgụgụ - mana ọ dị ka ịde banyere ụlọ ọrụ ụgbọ ala na otu ụgbọ ala dị egwu - na-enweghị amata na e nwere ụdị ụgbọ ala dị iche iche na ụlọ ọrụ ụgbọ ala dị iche iche.
Eziokwu ahụ bụ na onye okike mara mma kere ihe ọjọọ adịghị eme ka ị bụrụ onye mmebe ọjọọ site na mkpakọrịta. N'otu aka ahụ - eziokwu ahụ bụ na ahịa ndị ọzọ emebeghị nchebe kwesịrị ekwesị ma leghara ihe egwu sitere na ọrụ ịkọ apụtaghị na n'ihi na ụfọdụ ahịa dị njọ - ha niile ga-adị njọ. Ma - nke ahụ bụ ozi ekekpepde ke Ajụjụ ọnụ.
Aug 1, 2009 na 2:44 PM
@ Ross - ma ọ bụrụ na ị ga-agbaghara my snark -
N'abalị a na nkeji 60 - "Ford Pinto. Ọnwụ ọnwụ". Soro "Ford Cars nke nwere ike ọ gaghị agbawa" yana otu na "companieslọ ọrụ ụgbọ ala ndị ọzọ niile na - eme ụgbọ ala nwere ike ghara ịgbawa".
Mgbe ahụ, anyị ga-ewepụta otu akụkọ na "Roblọ akụ akụ nke dị ka Hollywood si dee ya" wee lelee "ndọpụ ego nde iri na otu nke mere n'izu a na-enweghị nsogbu".
Andy Rooney apụọ n'izu a.
Aug 2, 2009 na 8:16 PM
Ross, ọrụ imewe abụghị ihe dịka ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Otú ọ dị, ọ tụghị m n'anya na ajụjụ ọnụ ahụ nyere gị ozi na ebe nrụọrụ weebụ dị njọ. Eziokwu na-ekwu maka onwe ha…
Jul 31, 2009 na 2:02 PM
Agaghị m arụ ọrụ ọ bụla. Oge. Mana ọ bụrụ na onye ahịa enweghị ike ịkọ ma ọ bụ nwee ekele maka ọdịiche dị n'etiti ọrụ m na ọrụ nke igwe mmadụ CrowdSpring, gịnị kpatara ụwa ji kwesị ịkwụ ụgwọ maka ọrụ m? CrowdSpring dị ka alụmdi na nwunye zuru oke n'etiti ndị ahịa dị otú a na ndị nrụpụta nke na-ele ọrụ ha anya dị ka ngwaahịa.
Jul 31, 2009 na 2:25 PM
Echere m na ịkpọ gị ma ọ bụ David Airey 'onye mmebe' ga-abụ ihe na-adịghị mma na atụmatụ ndị otu gị na-enye ụlọ ọrụ. Ọ ga-amasị m ịhụ ihe ị ga-ewere na SPEC vesos NO! SPEC na post! M na-atụ anya ụbọchị m nwere ike na onye òtù ọlụlụ na a ike ka gị napụta a agbanwe agbanwe, usable, na mara mma ika ahụmahụ.
Eche m na m ga-atụnyere ya ịzụ ụgbọala. Naanị n'afọ ndị na-adịbeghị anya enwere m ike ịzụta ụgbọ ala dị mma, mara mma ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya ... Akwọọrọ m ụgbọala ole na ole tupu m rute ebe m nọ. AMA M n'anya ụgbọ ala m, ma enweghị m ohere ịzụta ihe m chọrọ maka afọ ole na ole!
Jul 31, 2009 na 2:35 PM
M ga-ekwu na nke ahụ bụ ezigbo ntụnyere, Doug - onye ahịa na-etinye ego na ọrụ nkọwa dị ka ịzụrụ "clunker" nke ụgbọ ala.
Agbanyeghị, ọ dị ka obere ihe na-emegiderịta onwe gị na blọgụ post gị. Ikekwe ị na-agbanwe obi gị?
Jul 31, 2009 na 2:44 PM
Ekwetaghị m na m na-agbanwe obi m - mana ikekwe echeghị m nke ọma na post m. M kwere na ego a imewe ike ogologo oge na mara na e nwere ihe ịrịba ROI na na nlereanya. CrowdSPRING na-enye ihe ozo mgbe nke ahu n’abaghi ​​ekwe omume. Enwere m obi uto na ngwaahịa m natara na CrowdSPRING ma nwee obi ụtọ na ọkaibe na ịdị mfe nke ngwa ha nyere m ka m nwee ike ikwurịta ma nweta ụdị m chọrọ.
Isi okwu m bụ na ndị dị ka gị ma ọ bụ Jon ekwesịghị ichegbu onwe gị banyere CrowdSPRING n'ihi na ị na-enye karịa karịa ihe ngosi. M na-ekwu n’elu na-na - a oké mmebe ekwesịghị ịtụ egwu SPEC ọrụ (ma ị na-eme ya ma ọ bụ na ị na-eme).
Ikekwe Mba! Ndị na-akwado SPEC kwesịrị ịkụziri ndị azụmaahịa banyere ihe ndị ọzọ, kama igosi naanị ọghọm. Dị ka a na-eto eto azụmahịa-nwe, Achọrọ m ọtụtụ imewe ọrụ mere, ma m na-enweghị mmefu ego ma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ọkwa ọbịa dịka ịba mba, aga m anabata ya!
Jul 31, 2009 na 3:24 PM
Enweghị nchekasị ma ọlị, Doug.
Ọ bụghị na m na-atụ ụjọ ịkọ nkọ, ma ọ bụ ichegbu onwe m gbasara weebụsaịtị ndị a, echekwara m na Jon Arnold ga-akwado m ebe a. Ọ bụ naanị na achọghị m ịhụ ndị na-eto eto, ndị na-emepụta amu amu na-egbusi oge ha site n'ịrụ ọrụ na enweghị nkwa ịkwụ ụgwọ.
Onye ọ bụla kwesiri ka akwụ ụgwọ ya. Spec nrụọrụ weebụ na-akwụ ụgwọ, mana ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke "ndị ọrụ" ha anaghị akwụ ụgwọ.
E nwere ọtụtụ nde ọrụ imepụta n'ebe ahụ, ọ nweghịkwa mkpa maka ndị na-ese ihe iweda nka ha ala site na "ịtụ anya" maka ego.
Ka o sina dị, laghachi na ide akwụkwọ, mana tupu m aga, nke ahụ bụ ụdịrị gị ịnye m ebe ọbịbịa ebe a. Daalụ maka nke ahụ. Ikekwe mgbe m rụchara akwụkwọ m.
Obi ụtọ na ngwụsị izu, Doug.
Jul 31, 2009 na 2:29 PM
Daalụ maka ide banyere ìgwè mmadụ. Enwere m ekele maka mkpasu iwe nke isiokwu ahụ - mana ka ị na-ede, ụlọ ọrụ abụghị naanị maka imewe. Genlọ ọrụ na-eweta ọtụtụ nkà bara uru na tebụl na-enweghị atụ - yana ọtụtụ ndị ahịa nwere ike irite uru na ndụmọdụ ahụ.
Mgbe anyị malitere igwe mmadụ, anyị ebughi n'uche ịsọmpi na ụlọ ọrụ. N'ezie, anyị echeghị na ụlọ ọrụ ga-enwe mmasị na itinye ndị obodo anyị okike aka. Mana site n'otu ụbọchị, ụlọ ọrụ kpọtụrụ anyị wee gwa anyị ka anyị wuo ngwaahịa nke na-enyekwu nzuzo na njikwa onye ọrụ (ọrụ igwe mmadụ anyịSPRING Pro). Anyị malitere ngwaahịa a na Septemba 2008, ebe ọ bụ na, ọtụtụ ụlọ ọrụ emeela ka obodo anyị nke ndị na-emepụta ihe mepụtara. Fọdụ emeela n'ihu ọha (dịka ọmụmaatụ: Omnicom's Element79, BBH, Shift Communications, na Starcom Worldwide's IP Pixel). Ndi ozo hoputara ka ha ghara ikwuputa ndi ha bu mgbe ha na-eziga oru. Fọdụ ejirila anyị naanị maka ọrụ, ebe ndị ọzọ ejirila otu ndị otu ha ji arụ ọrụ wee gbakwunye ọrụ ha na ọrụ na igwe mmadụ.
O doro anya na ụfọdụ ndị na-ese ihe anabataghị ụdị azụmaahịa anyị - na ịnụ ọkụ n'obi ha ịgbachitere ọnọdụ a, ụfọdụ ezigala ọtụtụ okwu ezighi ezi gbasara obodo anyị. Anyị ji anyị onwe anyị na ịbụ uzo - nke bụ otu ihe mere anyị na-enwe ike na-adọta ndị dị otú ahụ a nnukwu obodo nke na-emepụta na a obere oge. Edere m na nso nso a nke zara ajụjụ iri abụọ na ise a na-ajụkarị banyere igwe mmadụ - ọtụtụ n'ime ndị a zara ụfọdụ okwu ndị mmadụ welitere na azịza gị. Ọ bụrụ na ịgụbeghị ya, ị nwere ike ịchọta ya ebe a: http://blog.crowdspring.com/2009/07/14/crowdsprin...
N'ikpeazụ, anyị kwenyere na nnwere onwe ime nhọrọ na ahịa efu. Onye ọ bụla nwere ikike inyocha nnagide nke onwe ya maka ihe egwu ma kpebie etu ha chọrọ ịrụ ọrụ. ìgwè mmadụ abụghị maka onye ọ bụla. Anyị na-enye ohere na egwuregwu a na-egwu egwu ebe ndị mmadụ nwere ike ịsọ mpi dabere na talent ha na ọtụtụ puku ndị na-emepụta achọtala ndị ahịa ọhụrụ na igwe mmadụ. Asọmpi dị otú ahụ ọ na-eyi ụlọ ọrụ nrụpụta egwu? Mbanụ. Ahịa efu bụ ihe gbasara asọmpi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma n'ihu anyị gosipụtara ụzọ: iStockphoto, Innocentive, Etsy.
Ọzọkwa, daalụ maka mpempe echiche - yana ekele kwa maka ịdị na-eme omume ọma ma na-eme ka obodo anyị nyere gị aka. Jisie na mwepụta ahụ!
Jul 31, 2009 na 5:20 PM
Ross, daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge na ịzaghachi. Echere m na ị rụọla nnukwu ọrụ na ịnabata ọdịiche nke ngwaahịa gị na ọrụ ụlọ ọrụ yana ịnye nghọta na gị ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ụfọdụ na-arụ ọrụ n'ezoghị ọnụ!
Jul 31, 2009 na 5:23 PM
@ Ross - Na-ekweta, m hụrụ Don Quixote vibe n'anya maka ịlụ ọgụ maka ikike nke ndị nrụpụta iji nye ndị na-azụ gị ihe osise ọhụụ na enweghị akwụ ụgwọ Hụ, Aghọtara m mgbe niile ihe kpatara ụlọ ọrụ dị ka Crowdspring ji adị (ọrụ imewe n'efu - onye na - enweghị ike iguzogide?) Na ihe kpatara ndị na - azụ ahịa ji chee na ụdị ọrụ dị oke mkpa (echiche 150 maka $ 200 ebuka - ọ dị mma na nke ahụ) Maka ndụ m, enweghị m ike ịghọta ihe kpatara ndị mmebe ji esonye, ​​mana dị ka nkịta ochie (akụkụ nke "ọnọdụ" Echere m) Echere m na m ga-anọ na-agbagọ ihe mere ndị ọkachamara ọkachamara ji yie ka ha efughị ​​" inata ugwo "akuku nke ihe mere onye o bula Ọ bụ ezie na echere m na ọtụtụ ga-amata ya ngwa ngwa, ọnụọgụ ndị na-ese ihe na saịtị asọmpi dị egwu. Ndi Crowdspring dị ka ihe na-eyi ụlọ ọrụ nrụpụta egwu? Ọ bụghị n'ezie. Mana echiche - na ndị na-emepụta ekwesịghị ịkwụ ụgwọ dị ka ndị ọzọ - na-eme. Ọ na-efega n'ihu ihe na-eme ka "ụlọ ọrụ ọkachamara" nke ọma, "ụlọ ọrụ ọkachamara". Nke ahụ abụghị naanị Crowdspring. Ọ bụghịkwa echiche mbụ. Usoro nke omume ahụ malitere ogologo oge tupu ị nwee echiche maka Crowdspring, nke BTW, e buliri na saịtị Sitepoint, onye buliri ya na Chineke maara onye, ​​laghachị azụ na 2001 ma ọ bụ karịa, mgbe Logoworks buru ụzọ zoo asọmpi a haziri ahazi site na nkwado ha. weebụsaịtị Arteis. Ha mere nke a mgbe ha hụsịrị asọmpi logo nke na-eme na net niile ma chee na ha ga-abanye na ya. Agbanyeghi maka izi ezi, ekwesịrị m ịkọwa na Logoworks, otu ugboro "nwa ọjọọ" nke ụwa achọrọ, ma ọ dịkarịa ala kwụrụ onye ọ bụla na-enye onyinye ihe. Ekwere m na ha ka na-eme.
Agbanyeghi na m enwetụbeghị mmasị na Logoworks, ma e jiri ya tụnyere, 'ụdị azụmaahịa ha na-akatọkarị dị ka ọ bụ / ọ bụ ezigbo omume. Ha jiri otutu okwu okwu ị na-eji ugbu a eme ihe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okwu, yana otu ọdịiche dị mkpa. Ha gbakwunyere ihe n'ogologo "anyị anaghị akwụ nnukwu ụgwọ, mana opekata m na anyị na-akwụ onye ọ bụla ihe". Ewoo, nke ahụ bụ nke mbụ pụta na windo ka ụlọ ọrụ ndị na-asọ mpi bidoro ichepụta ụzọ isi gbaba Logoworks. Mgbe LW bruhaha sie, ihe dị ka n'afọ 2004, ndị na-ese ihe katọrọ Logoworks ma kwuo na ụdị azụmaahịa a na-ekwupụta ọnwụ nke ụlọ ọrụ a na-akpọ kpọmkwem otu ihe ndị na-akwado amụma na-akpọ ndị nkatọ ha ugbu a. Hel, echekwara m na akpaokwu a "ọnọdụ quo" ka a tụbara. Amaara m na LW jiri obere okwu azụmahịa dị jụụ laghachi azụ dị ka "leveraged" na "scalable".
Ndị ụlọ ọrụ dịka Crowdspring bụ akụkụ ọzọ bụ de-evolution nke azụmaahịa eserese eserese. Ọ bụghị ihe ọhụrụ. Ma ọ bụ, site na ọnụọgụ nke saịtị asọmpi saịtị na-arụ ọrụ ugbu a, na mbido ma ọ bụ na beta, ọ ga-abụrịrị ihe pụrụ iche. Otú ọ dị, enwere mgbanwe mgbanwe, nke ụlọ ọrụ dị ka nke gị na-eme, na imewe ahụ adịghị ka azụmahịa ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ihe ntụrụndụ, ma ọ bụ ọbụlagodi ihe egwuregwu (onye na-amu amu na nke ahụ). Na 99designs, Crowdspring na ụlọ ọrụ niile dị ebube na-amalite n'oge na-adịghị anya, ga-eme ka omume a ka njọ.
Mgbe m kwuchara ihe ndị a niile, enweghịkwa m nghọtahie banyere ọdịnihu. C nwamba emeriwo. Ọgụ, ma e wezụga ịkwa ákwá, agafeela. Ma, lee ihe ite. Ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka Crowdspring na-abịa n'ịntanetị, A ga-amanye gị ịsọ mpi. Ma dịka ị naghị ekepụta ngwa ahịa gị ozugbo, ị ga-ewe karịa, kwụ ụgwọ nke ga-eduga ndị na-azụ ahịa ịkatọ ndị na-emepụta akwụghị ụgwọ karịa ka ha na-eme ugbu a. O were ihe dị ka afọ iri maka ụlọ ọrụ ihe eserese eserese gbadaa na ala. Ọ ga-ewe nchịkọta na ịmepụta asọmpi saịtị ihe dị ka otu afọ. Abụọ n'elu.
Anyị nwere ike ịmefu ya ihe niile anyị chọrọ, mana imirikiti ndị na-emepụta ihe na-abanye asọmpi asọmpi maka otu ebumnuche - iji merie, kwụọ ụgwọ ma nwee olile anya, kpata ndụ ma ọ bụ gbakwunye nke ha nwere. Mana ọ dị oke egwu, iji mee ka ndị ọhụrụ na - edebanye aha, na opekata mpe ụfọdụ ndị na - emepụta ihe kwenyere na ọ ga - ekwe omume na weebụsaịtị dịka Crowdspring. Nke ọ bụla n'ime nke a na-egosi ọmarịcha foto maka ndị na-emepụta afọ ole na ole sochirinụ? Ọ bụchaghị.
Ahụrụ m na ị tụnyere CS na weebụsaịtị ndị ọzọ dị ka istock. Nke ahụ bụ ike gwụrụ, na enweghị nkọwa. Ma otu onye masịrị ha ma ọ bụ na ọ masịghị ha, Istock na-enye omenaala ngwaahịa ihe osise na foto enwere ike zụta ọtụtụ oge, ọtụtụ ndị dị iche iche. CS na-enye ọrụ omenaala otu onye maka onye zụrụ ya. Otu na-aga na gị Etsy ntule. Echere m na akpaokwu m na-achọ bụ "apụl na oroma".